A nwara FAA ka ọ gosipụta Boeing 737 MAX: Mkpesa mpụ ọhụrụ nke Federal Grand Jury
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » A nwara FAA ka ọ gosipụta Boeing 737 MAX: Mkpesa mpụ ọhụrụ nke Federal Grand Jury
Airlines • Aviation • News • ndị mmadụ • Safety • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Nnukwu ndị juri gọọmentị etiti na Northern District nke Texas weghachiri ebubo taa na -ebo onye bụbu onye ọkwọ ụgbọ elu maka ụlọ ọrụ Boeing (Boeing) aghụghọ site na ịghọgbu otu nyocha ụgbọ elu Federal Aviation Administration (FAA AEG) n'ihe metụtara nyocha FAA AEG nke Boeing 737. Ụgbọ elu MAX, na atụmatụ imebi ndị ahịa ụgbọ elu Boeing nke United States iji nweta nde kwuru nde dollar maka Boeing.
Etihiopian Airlines na Lion Air Murder nwere aha: E boro ebubo Boeing Chief Technical Pilot Mark A. Forkner?
N'October 28, 2018, Lion Air Boeing 737 MAX dara wee gbuo mmadụ 189.
Na Machị 10, 2019, ụgbọ elu Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX dara wee gbuo 157.
N'October 14, 2021, Boeing Chief Technical Pilot Mark A. Forkner bụ onye ebubo na United States maka ịghọgbu FAA na inye ikikere nke Boeing MAX 737. Boeing chekwara iri puku kwuru nde na ụzọ mkpirisi asambodo a.
Dịka akwụkwọ ụlọ ikpe gbara na Northern District of Texas Federal Court, Mark A. Forkner, 49, onye bụbu Washington State na ugbu a Keller, Texas, boro ebubo na ọ ghọgburu FAA AEG n'oge nyocha na asambodo nke ụgbọ elu Boeing 737 MAX.
Dị ka ebubo na ebubo ahụ, Forkner nyere ụlọ ọrụ ahụ ozi ụgha, ezighi ezi, na ezughi oke gbasara akụkụ ọhụrụ nke njikwa ụgbọ elu maka Boeing 737 MAX akpọrọ Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). N'ihi aghụghọ o boro, isi akwụkwọ nke FAA AEG bipụtara enweghị ntụaka ọ bụla gbasara MCAS. N'aka nke ya, akwụkwọ ntuziaka ụgbọ elu na ihe nkuzi ụgbọ elu maka ụgbọ elu ndị dị na United States enweghị ntụaka ọ bụla na MCAS-na ndị ahịa ụgbọ elu Boeing nke United States enweghị ozi dị mkpa mgbe ha na-eme na imecha mkpebi ha ịkwụ ụgwọ Boeing iri nde kwuru nde maka 737 MAX. ụgbọ elu.
"Forkner kwuru na o megburu ọnọdụ ntụkwasị obi ya site na -akpachapụ anya na -egbochi ozi dị oke mkpa gbasara MCAS n'oge nyocha FAA na asambodo nke 737 MAX yana ndị ahịa ụgbọ elu sitere na Boeing," onye osote onye ọka iwu Kenneth A. Polite Jr. Nkewa. “N'ime ime nke a, ọ napụrụ ndị na -anya ụgbọelu na ndị na -anya ụgbọelu ịmata ozi dị mkpa gbasara akụkụ dị mkpa nke njikwa ụgbọ elu ụgbọelu. Ndị na -achịkwa dị ka FAA na -arụ ọrụ dị mkpa iji hụ na nchekwa nke ọha na -efe efe. Maka onye ọ bụla na -eche maka imebi ọrụ onye na -ahụ maka mpụ, ebubo a na -eme ka o doo anya na Ngalaba Ikpe Ziri Ezi ga -achụso eziokwu ma jụọ gị ajụjụ. "
Onye ọka iwu US Chad E. Meacham kwuru na mpaghara North Texas nke Texas kwuru, "N'ịchekwa ego Boeing, a sịrị na Forkner gbochiri ozi dị oke mkpa n'aka ndị na -ahazi ya." "Nnukwu nhọrọ ọ họọrọ iduhie FAA gbochiri ikike ụlọ ọrụ ahụ ichedo ndị ọkwọ ụgbọ elu na ndị na -anya ụgbọ elu, enweghị ozi gbasara ụfọdụ njikwa ụgbọ elu 737 MAX. Ngalaba Ikpe Ziri Ezi agaghị anabata ịgba wayo - ọkachasị na ụlọ ọrụ ebe oke ya dị. "
"Forkner kwuru na ọ gbochiri ozi dị mkpa gbasara Boeing 737 MAX wee ghọgbuo FAA, na -egosi nleghara anya maka ibu ọrụ ya yana nchekwa nke ndị ahịa ụgbọ elu na ndị ọrụ ụgbọ mmiri," Onye enyemaka Director Calvin Shivers nke FBI kwuru. "Ndị FBI ga -aga n'ihu na -ejide ndị dị ka Forker ajụjụ maka omume aghụghọ ha nke na -emebi nchekwa ọha."
“Enweghị mgbaghara ọ bụla ndị na -aghọgbu ndị na -ahụ maka nchekwa maka uru onwe ha ma ọ bụ uru azụmahịa,” ka onye nyocha General Eric J. Soskin nke Ngalaba Ụgbọ njem US kwuru. “Ọfịs anyị na -arụ ọrụ mgbe niile iji nyere aka mee ka nchekwa dị na mbara igwe maka ife efe na ichebe ọha na -ejegharị ejegharị pụọ n'ihe egwu na -enweghị isi. Ebubo nke taa na -egosi nkwenye siri ike anyị na -arụkọ ọrụ na ndị mmanye iwu anyị na ndị ọrụ ikpe iji jide ndị na -etinye ndụ n'ihe egwu. "
Dị ka akwụkwọ ụlọ ikpe si kwuo, Boeing malitere ịzụlite na ire 737 MAX n'ime na gburugburu June 2011. FAA AEG bụ ọrụ maka ịchọpụta opekempe nke ọzụzụ ọkwọ ụgbọ elu achọrọ maka onye ọkwọ ụgbọ elu iji fega 737 MAX maka ụgbọ elu dị na United States, dabere na Ọdịdị na oke nke ọdịiche dị n'etiti 737 MAX na ụdị nke ụgbọ elu Boeing 737, 737 Next Generation (NG). Na mmechi nke ntule a, FAA AEG bipụtara 737 MAX Flight Standardization Board Report (FSB Report), nke gụnyere, n'etiti ihe ndị ọzọ, mkpebi FAA AEG maka ọzụzụ maka 737 MAX, yana ozi gbasara ọdịiche dị n'etiti 737 MAX na 737 NG. A chọrọ ka ụgbọ elu niile dị na United States jiri ozi dị na Akụkọ 737 MAX FSB dị ka ntọala maka ịzụ ndị ọkwọ ụgbọ elu ha ka ha na-efe ụgbọelu.
Dị ka Boeing 737 MAX Chief Technical Pilot, Forkner duuru 737 MAX Flight Technical Team na ọ bụ ya kpatara ịnye FAA AEG ezigbo, eziokwu na ozi zuru oke gbasara ọdịiche dị n'etiti 737 MAX na 737 NG maka nyocha FAA AEG, nkwadebe, na mbipụta nke 737 MAX FSB Report.
N'ime na gburugburu Nọvemba 2016, Forkner chọpụtara ozi gbasara mgbanwe dị mkpa na MCAS. Kama ịkekọrịta ozi gbasara mgbanwe a na FAA AEG, Forkner kwuru na ọ kpachaara anya gbochie ozi a wee ghọgbuo FAA AEG gbasara MCAS. N'ihi aghụghọ a na -ebo ya, FAA AEG wepụrụ ihe niile e kwuru na MCAS site na nke ikpeazụ nke 737 MAX FSB Report bipụtara na July 2017. N'ihi nke a, ndị na -anya ụgbọ elu na -efe 737 MAX maka ndị ahịa ụgbọ elu Boeing na United States enyeghị ozi ọ bụla. gbasara MCAS n'akwụkwọ ntuziaka ha na ihe nkuzi ha. Forkner zigaara ndị ahịa ụgbọ elu Boeing 737 MAX ndị Boeing akwụkwọ akụkọ 737 MAX FSB, mana enyeghị ndị ahịa a ozi dị mkpa gbasara MCAS na usoro nyocha 737 MAX FSB Report.
Na ma ọ bụ ihe dịka Ọktoba 29, 2018, mgbe FAA AEG matara na ọdụ ụgbọ elu Lion 610 - 737 MAX - dara na nso Jakarta, Indonesia, obere oge ka ọpụsịrị na MCAS na -arụ ọrụ n'ime obere oge tupu ihe mberede ahụ, FAA AEG chọpụtara. ozi gbasara mgbanwe dị mkpa na MCAS nke Forkner gbochiri. Mgbe ha chọpụtasịrị ozi a, FAA AEG malitere nyocha na inwale MCAS.
Na ma ọ bụ ihe dị ka Machị 10, 2019, mgbe FAA AEG ka na -enyocha MCAS, FAA AEG nụrụ na ụgbọ elu Ethiopian Airlines Flight 302 - 737 MAX - dara na nso Ejere, Ethiopia, obere oge ka ọpụsịrị na MCAS na -arụ ọrụ n'oge obere oge. okuku ahụ. Obere oge ihe mberede ahụ mechara, ụgbọ elu 737 MAX niile dara na United States.
E boro Forkner ebubo abụọ nke igwu wayo metụtara akụkụ ụgbọ elu na azụmaahịa etiti yana ọnụọgụ anọ nke wayo waya. A na -atụ anya na ọ ga -apụta izizi ụlọ ikpe ya na Fraịde na Fort Worth, Texas, n'ihu onye ọka ikpe US ọka ikpe Jeffrey L. Cureton nke Ụlọikpe Mpaghara US maka Northern District nke Texas. Ọ bụrụ na a maa ya ikpe, ọ ga -enwe ntaramahụhụ kacha njọ nke afọ 20 n'ụlọ mkpọrọ na ngụkọ ọ bụla nke igwu wayo na afọ 10 n'ụlọ mkpọrọ maka nghogbu ọ bụla metụtara akụkụ ụgbọ elu na azụmahịa obodo. Onye ọka ikpe ụlọ ikpe mpaghara ga -ekpebi ahịrịokwu ọ bụla mgbe ọ tụlechara Ntuziaka Ikpe Ikpe US na ihe ndị ọzọ gbasara iwu.
Ọfịs ubi Chicago nke FBI na DOT-OIG na-enyocha okwu a, site n'enyemaka nke FBI na ụlọ ọrụ ubi DOT-OIG ndị ọzọ.
Onye ọka ikpe ikpe Cory E. Jacobs, onye enyemaka Chief Michael T. O'Neill, na onye ọka ikpe ikpe Scott Armstrong nke Ngalaba Wayo nke Criminal, yana onye enyemaka US Attorney Alex Lewis nke Ọfịs onye ọka iwu US maka Northern District nke Texas na -ekpe ikpe a.
Ebubo bụ naanị ebubo, a na-ewerekwa ndị niile na-azara ọnụ ya ka ha bụrụ ndị aka ha dị ọcha ruo mgbe a ga-ama ha ikpe karịa enweghị obi abụọ zuru oke n'ụlọ ikpe.
Detuo nke ezi ebubo:
WestJet kpọrọ VP onye isi ọhụụ na Chief Loyalty ọhụrụ…